Vatori veNhau Vanocherechedza World Press Freedom Day Vachinyunyuta
Vatori venhau munyika vacherechedza zuva reWorld Press Freedom Day, vachiti vave kuda kusangana nemutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, kuti vaone kuti vangapedze seyi dambudziko rekushungurudzwa kwevatori venhau nevezvematongerwo enyika, iro riri kukura munyika.
Mumashoko avo pagungano rekupemberera World Press Freedom Day iro raitwa pachikoro cheHarare Polytechnic, mupepeti mukuru wekambani yeAssociated Newspapers of Zimbabwe, VaStanely Gama, vati vematongerwo enyika vari kutyityidzira vatori venhau.
VaGama vati nekurwisana kuri kuitika mubato reZanu PF pamwe nesarudzo dziri kuuya, zvave kuita kuti vematongerwo enyika vapindire mumashandiro anoita vatori venhau zuva nezuva.
Vatiwo vematongerwo enyika vari kushandisa mapurisa kushungurudza vatapi venhau.
Sachigaro weZimbabwe National Editors Forum, zvakare vari mupepeti webepanhau reIndependent, VaDumisani Muleya, vatiwo kunze kweve vezvematongerwe enyika, vemabhizimisi vari kuvhiringawo mashandire evatapi venhau.
Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Union of Journalists, VaFoster Dongozi, avo vanove mumwe wevakabvunzurudzwa nemapurisa pasina mhosva yavapara, vati zviri pachena kuti vematongerwe enyika vari kushandisa mapurisa kutyityidzira vatapi venhau.
Dzimwe nyaya dzave kukanganisa basa revatori venhau inyaya dzehuwori uhwo hwapararira nyika yose.
Vakawanda vapinda mumhemberero dzanhasi idzo dzange dzakarongwa nemasangano ese anomirira vatori venhau, hurumende pamwe neUNESCO, vatiwo Zimbabwe ichine mitemo inombunyikidza vatapi venhau kunyange hazvo bumbiro renyika risingabvumidze izvi.
VaMuleya vati zviri pachena kuti hurumende haina chido chekubvisa mitemo iyi yakaita seAccess to Information and Protection of Privacy Act.
Mumwe mudzidzisi wezvekutapwa kwenhau pachikoro cheHarare Polytechinic, VaAlexander Rusero, vatiwo nyaya dzematongerwo enyika dzave kutokanganisa kana vadzidzi muzvikoro zvepamusoro.
Vati zvikoro zvevatori venhau zviri kuita basa rakanaka chose uye vatapi venhau vanozovhiringwa vave kubasa uko vanotanga kukanganiswa nemakambani pamwe pamwe nevezvematongerwo enyika.
Mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko, Amai Thokozile Matutu, vaudza gungano iri kuti vachasvitsa chikumbiro chevatori venhau chekuda kusangana naVaMugabe kuna VaChris Mushowe gurukota rezvekuburitswa kwemashoko.
Vatiwo hururmende yakazvipira kusandura mitemo yezvekutapwa kwenhau kuti ienderane nebumbiro asi vakati bazi ravo rine rimwe basa rariri kuita pari zvino.
Mumashoko avo ekucherechedza World Press Freedom Day, munyori mukuru weUnited Nations, VaAntonio Guterres, vakurudzira kuti vatapi venhau varegwe vachiita basa ravo pachena vachiti izvi zvikaitika munyika munoita runyararo nebudiriro.